Ny Tombokase Fito. BNL Ministries - mg10
Boky misy Fanambarana mifanesy
Ampidiro ny andianà.
Rahalahy Branham notorin'i andian-dahatsoratra ity, taorian'ny nanambara ny hiverina any Jeffersonville, avy any Arizona.
(Jereo ny Mihoatra ny natoraly Rahona famariparitana)
Ampidiro ny Hafatra 'ny Ny Tombokase Fito, araka notorin'i alalan'ny Rahalahy Branham. (Anglisy)
First Seal - Mpitaingina ny soavaly fotsy.
Second Seal - Mpitaingina ny soavaly mena.
Third Seal - Mpitaingina ny soavaly mainty.
Fourth Seal - Mpitaingina soavaly hatsatra.
Fifth Seal - Fanahinareo ambanin'ny alitara.
Sixth Seal - Fahoriana Lehibe.
Seventh Seal - Fahanginana.
Famintinana ny tombo-kase fito.
Ny Tombokase voalohany.
Rahalahy Branham dia nampianatra fa ny mpitaingina azy dia mampiseho ny fanahin’ny antikristy. Ny soavaly fotsy dia mpamitaka (sandoka). Ny mpitaingina dia mody miseho ho olo-marina mba hiditra mangingina eo anivon'ny fiangonana. Ny soavaly fotsy dia mampiseho fa tsy amim-pahadisoana no hanombohan’izany rehetra izany. Ao amin'ny iray amin'ireo taratasin'i Jaona, dia nilaza ny fiangonana voalohany izy tany fa ny fanahin’ny antikristy efa eto an-tany. Izy dia mpamitaka. Tsy manana hery ara-panahy izy. Mampiasa fitaka i Satana hilalaovany ny hery ara-politika.
Rehefa avy namaky ny tombo-kase faharoa , dia nanazava ny fanambarana Rahalahy Branham. Ny mpitaingina ny soavaly mena, io dia tsy miova fa ilay nitaingina ny soavaly fotsy ihany. Mbola Satana ihany izany, izany hoe, manova ny tetik’adiny hanohitra ny fiangonana. Ny soavaly mena dia mampiseho ny ràn'ny maritiora Kristianina izay ho fatin’ ny sabatry ny mpaminany sandoka voalohany (Damaskosy, 304 ho 384 taorian'i Kristy), ary mpaminany sandoka nifandimby, toy ny papa, kardinaly, ary ireo evekan’ny fiangonana Kristianina mpaneso.
Rahalahy Branham dia nampianatra fa ireo nitaingina soavaly fotsy sy mena dia, niova soavaly fanintelony. Ny soavaly mainty dia mampiseho ny fahamaizinana syny tsy fahlalana ara-panahy. Tahaka ny mpitaingina soavaly ny mainty dia Raha vao nanomboka nitainginany soavaly mainty izy, dia maizina ny fotoana ho an'ny ny zanak 'Andriamanitra. Nisy feo avy eo afovoan'ny zava-manan'aina efatra izay manodidina ny seza fiandrianana. Io dia ny feon 'ny Zanak'ondry, nanao hoe: "Tandremonao tsy manimba ny diloilo sy ny divay." Ny menaka maneho ny Fanahy Masina. Ny divay maneho ny fahatairana avy amin’ny ny fanambarana izay entin’ny fanahin'Andriamanitra.
Rahalahy Branham dia nanazava ny fomba hoe nahoana ny mpitaingina io soavaly hatsatra io ihany no mpitaingina ny soavaly telo eo anoloany. Ny loko hatsatra eo amin’ny hodiny dia mampiseho fifangaroan'ny ny fotsy, mena, ary ny soavaly mainty, mampifangaro fivavahana, politika, ary ny herin’ny demonia amin'ny andro farany. Mariho fa ilay mpitaingi-tsoavaly saro-patarina dia tsy nisy anarana tamin’ireo soavaly telo voalohany. Tsy Manana Anarana amin'ny alalan'ny soavaly telo voalohany. Ankehitriny,eo amin’ ity soavaly hatsatra ity, ny mpitaingina azy dia hoe Fahafatesana. Ny helo no nanaraka Azy.
Iza moa ireo olona ireo izay asehon’ny tombo-kase fahadimy mitsangana manodidina ny alitara tao an-danitra ? Tsy ireo maritiora Kristianina maty izy ireo araka ny fihevitr’ireo mpampianatra Baiboly. Tsy misy hifandraisany amin'i Jesosy Kristy ny nahafaty azy ireo; fa kosa, maty maritiora nohon’ny "Tenin'Andriamanitra izy ireo, ary ny fijoroana vavolombelona nataony." Ireo olona ireo dia Jiosy izay nijanona marina ny lalàn 'i Mosesy.
Ny tombo-kase fahenina dia fanapahana ny fampandehanana fandaminana ny tontolo voajanahary. Izany dia manomboka amin'ny horohoron-tany lehibe , arahina fipoahana volkano, ady nokleary, sy loza be. Eo amin’ny fotoanan’ny tombo-kase fahenina dia mitranga ny anjomara fito, ny loza telo, ary ny loza fito farany voalaza ao amin'ny Apokalypsy toko faha- 8 hatramin’ny faha 17.
Na dia tsy nisy niteny na nihetsika aza tany an-danitra, i Jaona dia nahay nanavaka ny fandehan’ny fotoana. Rahalahy Branham dia nanazava fa nisy fahanginana tany an-danitra, satria io tombo-kase io dia tsy maintsy hijanona ho zava-miafina. Raha nahafantatra an’io Satana dia efa nohezahany navadika io araka izay efa fanaony hatramin’izay. Mba hisorohana ny mba tsy hitrangan'izany, ny tombo-kase fahafito dia tsy maintsy mijanona ho zava-miafina.
... Nadika sombiny avy "Mihoatra ny natoraly -Book 6"
amin'ny alalan'ny Owen Jorgensen
Ary hitako fa, indro, nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivohony, voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase fito, teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana.
Hoy ny Webmaster ...
Ity famintinana ity dia efa voangona avy amin'ny boky "Mihoatra ny natoraly -Book 6" ary fohy dia fohy. Tsy araky ny ny andian-dahatsoratra notorian’ny Rahalahy Branham, na ny boky nosoratan'i Owen Jorgensen. Mamporisika izahay amin’ny fahazoan-dalana tanteraka «downloading» ny andian-dahatsoratra rehetra. - Webmaster
(Angano - Ny Loharano, Babylona.)
Disponible avy: Mailaka:
Fito - Afisy
Ron Millevo Mailaka:
Afisy - Ny Tombokase
Supernatural Book 6 (Anglisy)